Dagaalyahanada ISIS oo la wareegay magaalo xeebeedka Qandala ee Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaalyahanada ISIS oo la wareegay magaalo xeebeedka Qandala ee Puntland
October 26, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Dagaalyahanada ISIS ee jooga gudaha gobolka Bari ee Puntland. [Sawirka: Snapshot]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dagaalyahano hubaysan oo katirsan garabka ISIS ee Soomaaliya ayaa la wareegay magaalo xeebeedka Qandala ee gobolka Bari ee Puntland, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo saraakiisha.
Duqa Qandala, Jaamac Maxamed Khuurshe ayaa saxaafada maxaliga ah u sheegay in dagaalyahanada ISIS ay la wareegeen magaalada.
“In ka badan 50 dagaalyahan oo ISIS ah ayaa qabsaday magaalada subaxnimadii Arbacada…. kadib markii ay soo galeen gudaha magaalada si dhaqso ah bay calankooda madow u sureen magaalada dhexdeeda,” ayuu yiri Jaamac Maxamed Khuurshe.
“Intooda badan dadkii shacabka ahaa waa ay ka carareen magaalada kadib markii ay kooxda soo galeen magaalada saakaydii hore.” Ayuu ku daray.
Dadka deegaanka ayaa u sheegay Puntland Mirror in koox hubaysan oo ISIS ah ay soo weerareen magaalada saakay oo Arbaco ah haddana ay gacanta ku hayaan magaalada.
“Ugu yaraan 70 maleeshiyo ah oo ka socda ISIS ayaa qabsaday magaalada saakay iska cabin la’aan,” sidaa waxaa yiri qof deegaanka ah oo codsaday in aan magaciisa la sheegin.
Bishii April ee sanadkan, ku dhawaad 20 dagaalyahan oo uu hoggaaminayo sarkaal hore oo AlShabaab ahaa, Cabdiqaadir Muumin ayaa kasoo muuqday muuqaal lagu baahiyay You Tube-ka, Muumin iyo kooxdiisa ayaa iclaamisay in ISIS ay saldhigoodii kowaad ka furatay gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland.
June 6, 2017 Dagaalyahan katirsan Daacish oo isku dhiibay Puntland
December 30, 2016 Reer Guuraa dowladda Puntland ka codsaday in ay ku taageerto baabuur ay ugu guuraan deegaanada roobabku ka da’een
November 7, 2017 Ciidamada Ammaanka Puntland oo bilaabay guluf ka dhan ah meelaha ay ku dhuumanayaan maleeshiyada ISIS ee gobolka Bari
ISIS fighters captures Qandala coastal town in Puntland
ISIS militants vacate Qandala in Puntland hours after they captured the town
Ciidamada booliiska Puntland oo howlgal amni ka bilaabay gudaha magaalada Boosaaso
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska Puntland ayaa Khamiistii howlgal amni ka bilaabay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari, sida uu sheegay masuul. Taliyaha ciiamada booliiska Puntland Janaraal Muxiyadiin Axmed Muuse ayaa shir jaraaid oo uu [...]
6 dead in Al-Shabab attack in Mogadishu
Somali security forces shot dead three extremists wearing soldiers’ uniforms, foiling an attempted al-Shabab attack on the presidential palace that began with a car bomb exploding, police said Saturday. The confrontation came a week after [...]
Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo Garoowe yimid
Garoowe-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Jimce ah yimid magaalada Garoowe. Khayre ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Garoowe ku qaabilay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in [...]